"G&G Convenience Store များမှလစဉ်ပရီမီယံကြေးများပေးချေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း" - Capital Taiyo Life Insurance
Capital Taiyo Life Insurance Limited တွင် နှစ်တိုငွေပင် ငွေရင်း အသက်အာမခံထားရှိသော Customer များအတွက် G&G Convenience Store များမှ တစ်ဆင့် လစဉ် ပရီမီယံကြေးများ ပေးချေနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ် ✨
“Premium Payment Enquiry App” ကို Google Play Store တွင် Update ပြုလုပ်ပြီး Make Payment မှ တစ်ဆင့် G&G ကိုဝင်ပြီး Pay ကိုနှိပ်၍ barcode ထွက်လာပါက ထို barcode ကို G&G တွင်ပြပြီး ကျသင့်သော ပရီမီယံကြေးကို ပေးချေလို့ ရပါတယ်ရှင့် …
ယခု လက်ရှိမှာတော့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ G&G ဆိုင်များမှာပဲ ယာယီ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပါသေးတယ် …
မကြာမီ အချိန်အတွင်းမှာ G&G ဆိုင်တိုင်းမှာ ပေးချေလို့ ရအောင် ကြိုးစားနေကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ရှင့် ။
Call center – 09765453422, 09765453423
“အသက်အာမခံထားရှိထားခြင်းဖြင့် မိမိတို့ဘဝအတွက်ငွေကြေးလုံခြုံမှု အပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ Capital Taiyo Life Insurance Limited နှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ရအောင်”
Capital Taiyo Life Insurance Limited သည်အသက်အာမခံအကြောင်း ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်သော အရောင်းဝန်ထမ်းများမှလည်း Customer များနှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နိုင်မည့် အသက်အာမခံအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်စေရန် အပြည့်အဝကူညီပေးလျက် ရှိပါတယ် ။ URL: http://www.capitaltaiyolife.com/
Capital Taiyo Life Insurance Limited အကြောင်းကို သိရှိလိုပါက – https://fb.watch/2Tww4wEPh4/
အာမခံထားငွေနဲ့ စုစုပေါင်းပေးသွင်းပရီမီယံတွက်ချက်ခြင်း အကြောင်း အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက page chat box မှသော်လည်းကောင်း အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို လည်းကောင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော် ☎️
Capital Taiyo Life Insurance Limited
Address: No. 7, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
Phone: 09-970019900, 09-970072525, 09-961603090
© 2021 Capital Taiyo Life Insurance. Powered by Myanmar Web Design